भिडियोलाई कसरी gif मा रूपान्तरण गर्ने | क्रिएटिभ अनलाइन
हुनसक्छ तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले gif साझेदारी गर्न रमाईलो गर्नुहुन्छ, तर तपाईंलाई वास्तवमै तिनीहरूलाई कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन। चिन्ता नगर्नुहोस्: यहाँ हामी तपाईंलाई एउटा सरल तरिका देखाउँछौं भिडियोलाई कसरी gif मा रूपान्तरण गर्ने। GIF हरू हाल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू बीच कुराकानी गर्ने सबैभन्दा सामान्य प्रवृत्तिहरू मध्ये एक हो। यसले हामीलाई अन्य व्यक्तिहरूसँग छिटो र नजिकको रूपमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ।
हालसालै, कम्पनीहरूले पनि आफ्नो रणनीतिहरूको लागि सहयोगीको रूपमा यस संसाधनमा सामेल भएका छन्, किनकि यसले ग्राहकको ध्यान अझ सजिलै खिच्न मद्दत गर्दछ।
1 GIFs के हो?
2 तपाइँका भिडियोहरूलाई कसरी gif मा बदल्ने
3 GIFs कहाँ डाउनलोड गर्ने
GIFs के हो?
1987 मा जन्मेका, इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूलाई तुरुन्तै स्वीकार गरे र तिनीहरूलाई तिनीहरूको वेब पृष्ठहरूमा आफ्नै रूपमा प्रयोग गर्न थाले। फोरमहरूको लागि धन्यवाद, GIF ले धेरै लोकप्रियता प्राप्त गर्न सफल भयो, किनभने त्यस समयमा त्यहाँ भिडियोहरूको लागि कुनै ठाउँ थिएन, प्राविधिक सीमितताहरूको कारण। GIF को प्रकृति (छोटो र निरन्तर) ले यसलाई एक हास्यपूर्ण आला बजारमा जीवित रहनको लागि आदर्श बनाउँछ जहाँ इन्टरनेटमा भिडियोहरू डाउनलोड गर्न र हेर्न अझै गाह्रो थियो।
को GIFs (ग्राफिक्स इन्टरचेन्ज ढाँचा), एक प्रकारको छवि ढाँचा हो जसमा 3-5 सेकेन्डको अवधिमा एक वा धेरै फ्रेमहरूको ध्वनि बिना दोहोरिने आन्दोलन समावेश हुन्छ। तिनीहरूसँग अधिकतम 256 रङहरू छन्, त्यसैले तिनीहरू छन् भिडियोहरू भन्दा हल्का। GIFs को कार्य ग्राफिक सामग्रीको साथ पाठको साथमा राख्नु हो, सामान्यतया तिनीहरूसँग अन्तर्क्रिया नगरी स्लाइडहरूमा बचत गर्न।
अब तपाईलाई GIF को बारेमा थोरै थाहा छ, हामी तपाईलाई एउटा सानो ट्यूटोरियल छोड्छौं भिडियोलाई कसरी gif मा रूपान्तरण गर्ने:
तपाइँका भिडियोहरूलाई कसरी gif मा बदल्ने
Giphy GIFs को लागी एक अनलाइन खोज इन्जिन हो, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिन्छ इन्टरनेटमा Gifs सिर्जना, साझेदारी, खोज र साझेदारी गर्नुहोस्। यो गुगल जस्तै हो भनौं, तर GIF को लागि विशिष्ट। यो वेबसाइट यसको सामग्री, यसको अनुप्रयोग र यसको API (एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस) को कारणले सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो। यसको लक्ष्य राम्रो GIF हरू फेला पार्न र साझेदारी गर्न सजिलो बनाउनु हो। यहाँ छ कि तपाइँ कसरी तपाइँको भिडियोहरू gif मा बदल्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ म तपाईलाई सिधा लिङ्क छोड्छु। एकचोटि तपाईंले पृष्ठमा दर्ता गरिसकेपछि, तपाईंले शीर्ष दायाँ छेउमा जानुपर्छ, र <बटन थिच्नुहोस् >।
हालको विन्डोमा, तपाईंले GIF विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, एकचोटि तपाईंले क्लिक गरेपछि तपाईंको कम्प्युटरमा एउटा ट्याब खुल्नेछ जहाँ तपाईंले GIF मा रूपान्तरण गर्न चाहनु भएको भिडियो खोजी र चयन गर्नुपर्नेछ। तपाईं छविहरू वा YouTube लिङ्कबाट पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मनमा राख्नुपर्छ मात्र स्वीकार निम्न ढाँचाहरू: JPG, PNG, GIF, MP4 र MOV। तपाईं स्टिकर र ब्याकड्रप (पृष्ठभूमि) पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो भिडियो छनोट गरिसकेपछि, तपाईंले gif को सुरु र आफ्नो मनपर्ने अवधि चयन गर्नुपर्छ। जब तपाइँ ती प्यारामिटरहरू परिभाषित गर्न समाप्त गर्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुहोस् < >।
सम्पादकको यस खण्डमा, < > तपाईं आफ्नो gif मा पाठ र रङ थप्न सक्नुहुन्छ र यसमा एनिमेसन पनि थप्न सक्नुहुन्छ। मा < >, तपाईले स्टिकरहरू खोज्न र थप्न सक्नुहुन्छ र < मा > तपाई जे चाहानुहुन्छ कोर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि तपाईले विभिन्न सम्बद्ध ट्यागहरू थप्न सक्नुहुन्छ कि शब्दहरू जस्तै: "बिरालो", "ब्याकप्याक", "कार", "रमाइलो", र यस्तै अन्य खोजशब्दहरूसँग खोजी गर्न। अन्तमा, यसलाई बचत गर्नको लागि तपाईंले आफ्नो माउसको दायाँ बटन क्लिक गरेर थिच्नु पर्नेछ को रूपमा बचत गर्नुहोस्। यदि तपाइँ यसलाई इन्स्टाग्राममा साझा गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ कथाहरूमा जानु पर्छ र GIF विकल्प चयन गर्नुपर्नेछ, तपाइँ पहिले राख्नुभएको ट्यागहरू खोज्दै र यो हो।
GIFs कहाँ डाउनलोड गर्ने
यहाँ वेबसाइटहरूको सूची छ जहाँ तपाइँ नि: शुल्क GIF डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
GIF को घर: यस वेब पृष्ठलाई क्षेत्रहरू र विषयवस्तुहरूद्वारा वर्गीकृत गरिएको छ, यसरी GIF हरूको विस्तृत संग्रह छ। कार्टुन, मानिसदेखि सवारी साधन वा पेशासम्म। तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइलमा डाउनलोड र बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
Tumblr: यो एक ब्लग प्लेटफर्म हो, तर यसमा अन्य प्रयोगकर्ताहरूले साझेदारी गर्ने GIF को एक खण्ड छ र जुन तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, समान सामाजिक सञ्जालमा लाइक वा साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ। Giphy जस्तै, यसमा ट्यागहरूद्वारा खोज पट्टी छ।
Gfycat: GIF घर जस्तै, यस वेबसाइटमा GIF हरू सबैभन्दा लोकप्रिय, ट्रेन्डिङ, सेलिब्रेटीहरू, प्रतिक्रियाहरू, ध्वनि, खेलहरू, र खोजहरू जस्ता कोटीहरूमा व्यवस्थित छन्। यसले खोज पट्टीमा शब्द प्रविष्ट गरेर, ग्यालरीबाट फाइलहरू अपलोड गरेर, र अनुकूलन एनिमेटेड छविहरू सिर्जना गरेर इच्छित GIF खोज्न विकल्पहरू पनि प्रदान गर्दछ।
ReactionGifs: इन्टरनेटमा एनिमेटेड GIF हरू छन् जुन विभिन्न अवसरहरू र मुडहरू अनुरूप छन्। ReactionGifs GIF ले यससँग गर्नुपर्दछ: GIF हरू बनाउनुहोस् जसले केही भावनाहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ, जस्तै रिस, अनिर्णय, आनन्द, निराशा... त्यहाँ एक व्यापक ट्यागिङ प्रणाली पनि छ।
GIF बिन: हामीलाई हाम्रा एनिमेसनहरू अपलोड गर्न, अरूलाई डाउनलोड गर्न वा वेबसाइटमा इम्बेड गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरूको क्याटलगमा कुल हजारौं छविहरू छन्। यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने तपाइँ यी छविहरू एकीकृत खोज इन्जिन मार्फत फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
टेनर: GIF हरू अनलाइन सिर्जना गर्ने प्लेटफर्म हो। कोटी र खोज पट्टी संग। तपाईको खोज इन्जिनले खोज जारी राख्नको लागि अन्य किवर्डहरू सिफारिस गर्नेछ।
सिर्जना गर्दा तपाईंले ध्यानमा राख्नु पर्ने कुरा GIF, कि तिनीहरू एक हुन सक्छन् दोहोरो तरवार, त्यसैले तिम्रो प्रयोग गर्नुहोस् हुनै पर्छ मध्यम, तिनीहरूलाई धेरै पटक प्रयोग गर्नु अरूको लागि धेरै कष्टप्रद हुन सक्छ।
आशा छ यो लेखले तपाईंलाई उत्कृष्ट GIF हरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंसँग यस विषयमा अरू केही भन्नु छ भने, हामीसँग साझेदारी गर्न नबिर्सनुहोस्।
र तपाईं, के तपाईं यस प्रवृत्तिमा सामेल हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी GIF मा भिडियो रूपान्तरण गर्ने
फोटोग्राफरहरूको लागि वाक्यांशहरू